The Law | Myanmar Media Lawyers' Network
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း လှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ
RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION AS A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT
AND ITS IMPORTANT TO THE
WHEREAS, we see an urgent need in Southeast Asia to utilize remedies under domestic and international law against these threats to freedom of expression, for we want to establish an edifice for free expression that will serve not only the generation but the future generations of Southeast Asians;
WE DECLARE that the right to freedom of expression is essential in the pursuit of truth, justice, equality and accountability; but more importantly, freedom of expression asafundamental human right since as human beings we yearn to express our own humanity.
WE DECLARE that in order to animate our core believe in the right to freedom of expression asafundamental human right, our individual members shall commit not to prosecute criminal case against anyone for something he or she express except in accordance with international human rights norms, and shall advocate for the repeal of criminal libel laws.
WE DECLARE that the right of freedom of expression is universal, but that the methods for its advocacy and protection are contextual; hence, we shall raiseaSoutheast Asian voice that will champion freedom of expression in our region in accordance with the international human rights norms as exercised by journalists, bloggers, netizens, citizens and human rights defenders, in whatever medium, form, or frontier, whether traditional or emerging.
WE DECLARE that to be more effective advocates for freedom of expression and the rule of law in Southeast Asia, we resolve to work together in unity of purpose, action, spirit and passion, and WE THEREFORE ESTABLISH the ADVOCATES FOR FREEDOM OF EXPRESSION COALITION_SOUTHEAST ASIA to advance freedom of expression across Southeast Asia consistent with international human rights norms, through strategic litigation, education, training and advocacy.
LASTLY, WE DECLARE that in establishing this freedom of expression coalition, our vision is to achieveaSoutheast Asia that uploads and protects freedom of expression, and the rule of law, serving asabeacon of free speech to the world.
Signed this 27th day of September 2015, in Lapu-Lapu City, Mactan Island, Cebu, Philippines, by our duly authorized representatives:
အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးအဖြစ် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်နှင့် အာဆီယံဒေသအတွင်း ယင်း၏ အရေးပါမှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိုးရမဟုတ်သော လူ့အခွင့်အရေး (အထူးသဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်) ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်၊ တိုးမြှင့်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
မျက်မှောက်ကာလသည် အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့၌ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် အခြိမ်းခြောက်ခံနေရချိန်ဖြစ်သည်။
အရှေ့တောင်အာရှတွင် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေများကို အသုံးပြု၍ ဤခြိမ်းခြောက်မှုကြီးကို ကာကွယ်တားဆီးရန် အရေးတကြီး လိုအပ်လျှက်ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အသိအမှတ်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုလက်ရှိ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းသာမက အနာဂါတ်မျိုးဆက်များကိုပါ အလုပ်အကျွေးပြုမည့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်တစ်ရပ်၊ အဆောက်အအုံတစ်ရပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တည်ထောင်လိုသည်။
လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်သည် အမှန်တရား၊ တရားမျှတမှု၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ တာဝန်ယူမှုတို့ကို ထုတ်ဖော်ရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း၊ ပို၍အရေးပါသည့် အချက်မှာ လူသားအဖြစ် လူ့ဘ၀ဖြစ်တည်မှု ဖြစ်စဉ်တွင် ခံစားသိတတ်စဉ်ကစ၍ တည်ရှိသည့် အခြေခံ အကျဆုံး လူ့အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကြေညာလိုက်သည်။
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ကို ဗဟိုပြုရန် မမှိတ်မသုန်ယုံကြည်ကြသော ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဦးချင်းအဖွဲ့ဝင်များ အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားသူ မည်သူ့ကိုမဆို တရားစွဲဆိုခြင်းမပြုရန်နှင့် ဂုဏ်အသရေ ဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြစ်မှုပြဌာန်းချက်များကို ဖျက်သိမ်းရန် ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကြေညာလိုက်သည်။
လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်သည် ကမ္ဘာ့လက္ခဏာဆောင်သော အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ပုံ နည်းနာမှာ သြဇာလွှမ်းသည့် အခြေအနေ၊ ဖြစ်စဉ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် တည်မှီနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကြေညာလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ဒေသ အတွင်း နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ကို ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ ကာကွယ်သည့် အရှေ့တောင်အာရှ၏အသံ သတင်းမီဒီယာများ၊ ဘလောဂ္ဂါများ၊ အင်တာနက် သုံးစွဲသူများ၊ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သူများ၊ နိုင်ငံသားများ၊ ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုး၊ နည်းနာအမျိုးမျိုး ဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုများ၊ ထုံးတမ်းဓလေ့နှင့် ခေတ်သစ်ဆိုင်ရာ ထုတ်ဖော်ချက်များ၏ လွတ်လပ်သော အရှေ့တောင်အာရှ၏ အသံကို ကျွန်ုပ်တို့ ခွင်းဖောက်ပဲ့တင်လိုက်သည်။
အာဆီယံဒေသအတွင်း စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ပေါင်းစည်းဖြစ်ထွန်းမှုအတွင်း နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ဒေသဆိုင်ရာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့်ကို လေးစားရန်၊ လိုက်နာရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးသက်သက် အကျိုးစီးပွားများအတွက် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ကို အလဲအထပ် ပြုလုပ်ခွင့်မရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ဖော် ကြေညာလိုက်သည်။ ထို့အပြင် အာဆီယံနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၌ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခံရခြင်းသည် ဒေသတစ်ခုလုံးနှင့် သက်ဆိုင်အလေးအနက်ပြုစရာ ကိစ္စရပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက အတည်ပြုသည့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ကို ကာကွယ်ရန်သည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံတိုင်း၏ တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ထပ်မံအလေးအနက်ပြု ကြေညာလိုက်သည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ ခွဲခြားမှုကင်းစင်ခြင်းနှင့် တရားမျှတသော တရားစီရင် ရေးစနစ် တို့သည် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ကို ကာကွယ်ရာနှင့် တိုးမြှင့်ရာ၌ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ထပ်မံအတည်ပြု ကြေငြာလိုက်သည်။
အာဆီယံဒေသတွင်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ထိထိရောက်ရေုာက် ဦးဆောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ရန် ညီညွှတ်သော ရည်မှန်းချက်၊ လှုပ်ရှားမှု၊ စိတ်ဓါတ်နှင့် ထက်သန်ပြင်းပြ ခိုင်မာစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ သံဓိဌာန်ချမှတ်လိုက်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ဗျူဟာမြောက် တရားစီရင်ရေး၊ ပညာရေး၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း စသည်တို့ကို ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် “အရှေ့တောင်အာရှ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြား ခွင့်ဆိုင်ရာ ဦးဆောင်သူများ၏ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ “Advocates for Freedom of Expression-South East Asia (AFEC-SEA)” ကို တည်ထောင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကြေညာလိုက်သည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် ဤသွေးစည်းညီညွတ်သော ညွှန့်ပေါင်းအင်အားစုတစ်ရပ်ကို ထူထောင်ခြင်းမှာ အာဆီယံဒေသတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရန်၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ရန်နှင့် တိုးမြှင့်ရန်၊ “လွတ်လပ်သောအသံ” ၏ အန္တရာယ်အချက်ပြ မီးရှူးတန်ဆောင်အဖြစ် ကမ္ဘာကြီးကို အလင်းသစ်ထွန်းညှိရှေ့ဆောင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကြေညာလိုက်သည်။
ဤကြေညာစာတမ်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မက်တန်စီဘူးကျွန်း၊ လာပူးလာပူးမြို့တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့ အာဆီယံညီနောင်သားချင်း ရှေ့နေများ လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
Enpower (for change)
ICJR Institute for Criminal justice Reform
မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကွန်ရက(Myanamr Lawyer Network)
MMLN(Myanmar Media Lawyers` Network)
(နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၅/ ၂၀၀၄)
၁၃၆၆ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၂ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ ရက်)်
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် အောက်ပါဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်စေရမည်-
(က) သတင်းအချက်အလက် (Information) ဆိုရာတွင် အချက်အလက် (Data) မူရင်းစာ (Text) ပုံသဏ္ဍာန် (Image) အသံ၊ သင်္ကေတ (Code) ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ဈ ဆော့ဖ်ဝဲ (Software) နှင့် အချက်အလက်အစုအဝေး (Data base) တို့ ပါဝင်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
International Covenant on Civil and Political Rights. ICCPR
အပိုဒ် - ၁
(၁) လူတိုင်းသည် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိသည်။ ယင်းအခွင့်အရေး၏ အကျိုးတရားကြောင့် မိမိတို့နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို လွတ်လပ်စွာပြဋ္ဌာန်းပြီး မိမိတို့၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေး အတွက် လွတ်လပ်စွာ ကြိုးပမ်းသည်။
(၂) နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ အကျိုးတရားအပေါ် ပြည်သူများသည် ဖြစ်လာနိုင်သော စုပေါင်းစီးပွားရေး အတွက် မည်သည့်တာဝန်မှ စွဲလန်းငဲ့ကွက်မှုရှိပဲ မိမိ၏ ဆန္ဒအလျောက် မိမိတို့၏ သဘာဝသယံ ဇာတပစ္စည်းများ ထုတ်ယူနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(၃) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် လက်အောက်ခံနယ်မြေများ၏ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် တာဝန်ရှိသော နိုင်ငံများ အပါအ၀င် လက်ရှိစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံများသည် ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်းပါ အချက်များ နှင့်အညီ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် ကြိုးစားရမည့်အပြင် ထိုအခွင့်အရေးကို လေးစားတတ်ရမည်။
* ပြည်သူအားလုံးသည် မိမိတို့၏ အနာဂတ်နိုင်ငံရေးကို ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
* ပြည်သူအားလုံးတို့သည် မိမိပိုင်သဘာဝအမွေများကို သင့်တော်သည်ဟု ထင်မှတ်သည့်အလျောက် အသုံး ပြုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ် ၁၂။)
၁။ ဤဥပဒေကို သတင်းမီဒီယာဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက် စေရမည်-
(က) သတင်းမီဒီယာ ဆိုသည်မှာ သတင်းရှာဖွေခြင်း၊ ရယူခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ မှတ်တမ်း တင်ခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း အစရှိသည် တို့ကို စာ၊ အသံ၊ အရုပ်၊ ရုပ်သံ၊ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်၊ ရုပ်ပုံဒီဇိုင်း စသည့် အသွင်သဏ္ဍာန်များ အသုံးပြုကာ ပုံနှိပ်မီဒီယာ၊ ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာ၊ အယ်ဒီတာ တာဝန် ယူမှုရှိသော အင်တာနက် မီဒီယာ သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် လုပ်ကိုင်သည့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။
(၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၅။)
၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၇ ရက်
(၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင် ဒနိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး သို့မဟုတ် ပြည်သူတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရား အကျိုးငှာ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် လက်နက်မပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်၊ စီတန်း လှည့်လည်ခွင့် အခွင့်အရေးများကို လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အလျောက် နိုင်ငံသားများက ယင်းအခွင့်အရေးများကို ဥပဒေနှင့်အညီ သုံးစွဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
၁။ ဤဥပဒေကို ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း လှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါ အတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၃။)
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ် ၆၆ ။)
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ် လဆန်း ၄ ရက်
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်)
အမည်၊ သက်ဆိုင်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် -
(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ မြေထု၊ ရေထု၊ လေထုတို့ ပါဝင်သော နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဋ္ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့်မဆို သက်ဆိုင် စေရမည်။
(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပြင်ပရောက် မည်သည့်အရပ်ဒေသ၌မဆို ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်စေရမည်။